समाचार - LNG अनुप्रयोगहरूको लागि क्राइोजेनिक भल्भहरू
१. क्रायोजेनिक सेवाको लागि भल्भ छनौट गर्नुहोस्
क्रायोजेनिक अनुप्रयोगहरूको लागि भल्भ छनौट गर्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ। खरीददारहरूले बोर्ड र कारखानामा सर्तहरू विचार गर्नुपर्दछ। यसका अतिरिक्त, क्राइोजेनिक फ्लुइडको विशिष्ट गुणहरूलाई विशिष्ट भल्भ प्रदर्शन आवश्यक हुन्छ। उचित चयनले प्लान्टको विश्वसनीयता, उपकरण सुरक्षा, र सुरक्षित अपरेशन सुनिश्चित गर्दछ। ग्लोबल एलएनजी मार्केटले दुई मुख्य भल्भ डिजाइनहरू प्रयोग गर्दछ।
सम्भव भएसम्म प्राकृतिक ग्यास ट्या tank्क राख्न अपरेटरले आकार घटाउनु पर्छ। तिनीहरूले यो LNG (तरिकारित प्राकृतिक ग्यास, तरल प्राकृतिक प्राकृतिक ग्यास) मार्फत गर्छन्। ठंडा गरेर लगभग प्राकृतिक ग्यास तरल हुन्छ। -165 डिग्री सेल्सियस इस तापमान मा, मुख्य पृथक वाल्व अझै पनी काम गर्नु पर्छ
२. भल्भ डिजाइनलाई के असर गर्छ?
तापमानले भल्भको डिजाइनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। उदाहरण को लागी, मध्य पूर्व जस्तो लोकप्रिय वातावरण को लागी प्रयोगकर्ताहरुलाई यसको आवश्यकता हुन सक्छ। वा, यो ठण्डा वातावरण जस्तै ध्रुव महासागरहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। दुबै वातावरणले भल्भको कडाई र स्थायित्वलाई असर गर्न सक्छ। यी भल्भको घटकहरूमा भल्भ बडी, बोनट, स्टेम, स्टेम सील, बल भल्भ र भल्भ सीट समावेश छ। बिभिन्न सामग्री संरचनाको कारण, यी भागहरू विस्तार र विभिन्न तापमानमा अनुबंध。
क्रायोजेनिक अनुप्रयोग विकल्पहरू
अपरेटरहरूले चिसो वातावरणमा भल्भहरू प्रयोग गर्दछ, जस्तै ध्रुव समुद्रमा तेल रिसा।
अपरेटरहरू फ्रिजहरू व्यवस्थापन गर्न भल्भहरू प्रयोग गर्छन् जुन ठण्डा तल हो।
प्राकृतिक ग्यास वा अक्सिजन जस्ता अत्यधिक ज्वलनशील ग्याँसहरूको मामलामा, भल्भले पनि आगोको घटनामा ठीकसँग सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
त्यहाँ रेफ्रिजरन्टको सामान्य ह्यान्डलिंगको बेला दबावको एक निर्माण हो। यो वातावरणको बढ्दो ताप र त्यस पछि भाप गठनको कारण हो। भल्भ / पाइपिंग प्रणाली डिजाइन गर्दा विशेष ध्यान राख्नु पर्छ। यसले दबाव निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ।
द्रुत तापमान परिवर्तनले श्रमिक र कारखानाको सुरक्षालाई असर गर्न सक्दछ। बिभिन्न भौतिक संरचना र समयको लम्बाइको कारण तिनीहरू रेफ्रिजरन्टको अधीनमा छन्, क्राइोजेनिक वाल्भको प्रत्येक घटक बिभिन्न दरहरूमा विस्तार हुन्छ र ठेक्का हुन्छ।
अर्को ठूलो समस्या जब रेफ्रिजरन्टहरू ह्यान्डल गर्ने वरपरको वातावरणबाट तातो वृद्धि हो। तातोमा यो बृद्धिले के कारणले उत्पादकहरू भल्भ र पाइपहरूलाई अलग गर्न मद्दत गर्दछन्
उच्च तापमान दायराको अतिरिक्त, भल्भले पर्याप्त चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। तरलीकृत हीलियमको लागि, तरलीकृत ग्यासको तापक्रम -270 ° सेन्टिग्रेड हुन्छ।
यसको विपरीत, यदि तापमान निरपेक्ष शून्यमा खस्छ, भल्भको कार्य धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। क्रायोजेनिक भल्भले वातावरणमा तरल ग्यासको साथ पाइपहरू जोड्दछ। यसले परिवेश तापमानमा गर्छ। परिणाम पाइप र वातावरण को बीच 300 डिग्री सेल्सियस को एक तापमान फरक हुन सक्छ।
तापमान भिन्नताले तातो क्षेत्रबाट चिसो क्षेत्रमा गर्मीको प्रवाह सिर्जना गर्दछ। यसले भल्भको सामान्य कार्यमा क्षति पुर्‍याउँछ। यसले चरम अवस्थाहरूमा पनि प्रणालीको क्षमता कम गर्दछ। यो विशेष चिन्ताको विषय हो यदि बरफको तातो अन्तमा।
यद्यपि कम तापमान अनुप्रयोगहरूमा, यो निष्क्रिय हीटिंग प्रक्रिया पनि जानबूझि छ। यो प्रक्रिया भाल्भ स्टेम सील गर्न प्रयोग गरीन्छ। सामान्यतया, भल्भ स्टेम प्लास्टिकले बन्द गरिएको हुन्छ। यी सामग्रीहरु कम तापमान को सामना गर्न सक्दैन, तर दुई भाग को उच्च प्रदर्शन धातु मुहर, जो विपरीत दिशा मा धेरै सार्न, बस धेरै महँगो र लगभग असम्भव छ।
यस समस्याको एक धेरै सरल समाधान छ! तपाइँ वाल्भ स्टेमलाई सील गर्न प्रयोग गरिएको प्लास्टिकलाई त्यस्तो ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ जहाँ तापक्रम अपेक्षाकृत सामान्य हुन्छ। यसको मतलब भल्भ स्टेमको सिलेन्ट द्रवबाट केही टाढा राख्नु पर्छ।
T.तीन अफसेट रोटरी टाइट अलगाव वाल्भ
यी अफसेटहरूले भल्भ खोल्न र बन्द गर्न अनुमति दिन्छ। उनीहरूसँग अपरेशनको समयमा एकदम थोरै घर्षण र घर्षण हुन्छ। यसले भल्भलाई अझ कडा बनाउन स्टेम टोक़ पनि प्रयोग गर्दछ। LNG भण्डारनको एउटा चुनौती फसाएको गुहा हो। यी काभाहरूमा तरलले विस्फोटक रूपमा 600०० भन्दा बढी पटक फुल्न सक्छ। तीन-घुमाउने तंग अलगाव वाल्भले यस चुनौतीलाई हटाउँछ।
S। एकल र डबल चकित भल्भहरू
यी भल्भहरू द्रवीकरण उपकरणमा प्रमुख अंश हुन् किनभने तिनीहरू रिभर्स बहावको कारण हुने क्षति रोक्दछन्। सामग्री र आकार महत्वपूर्ण विचार हो किनभने क्रायोजेनिक भल्भहरू महँगो हुन्छन्। गलत भल्भको नतिजा हानिकारक हुन सक्छ।
ईन्जिनियरहरूले कसरी क्रायोजेनिक भल्भको कडाई सुनिश्चित गर्छन्?
चुहावट धेरै महँगो हुन्छ जब कसैले पहिलो फ्रिजमा गैस बनाउने लागतलाई विचार गर्दछ। यो पनि खतरनाक छ।
क्रायोजेनिक टेक्नोलोजीको साथ ठूलो समस्या भनेको भल्भ सीट चुहावटको सम्भावना हो। क्रेताहरू प्रायः शरीरको सम्बन्धमा स्टेमको रेडियल र रेखीय विकासलाई हल्कासँग लिन्छन्। यदि खरीददारहरूले ठीक भल्भ छान्छन् भने तिनीहरू माथिका समस्याहरूबाट बच्न सक्दछन्।
हाम्रो कम्पनीले स्टेनलेस स्टीलले बनेको कम तापमान वाल्भहरू प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छ। तरल ग्यासको साथ अपरेशनको बेला, सामग्री तापक्रम ग्रेडिएन्टमा राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छ। क्राइोजेनिक भल्भले १०० बारसम्मको कडाई सँग उपयुक्त सील सामग्री प्रयोग गर्नुपर्दछ। थप रूपमा, बोनेट विस्तार गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण फिचर हो किनभने यसले स्टेम सिलेन्टको कडाई निर्धारित गर्दछ।